Fluffy Ruffles မိန်းကလေးများ Tutu Pettiskirt - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
Fuffffy Ruffles မိန်းကလေးများ Tutu Pettiskirt
$18.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $24.99
Kid Size ကို 4T 3T65 872T 12M
အရောင် မက်မွန်သီး Black က ပန်းရောင်အနက်ရောင် ပန်းရောင်နှင့် aqual အပြာ မက်မွန်နှင့်သန္တာ မီးခိုးရောင်နှင့်ပန်းရောင် ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ပူ bean သဲအရောင် ဖရဲသီးအနီရောင် ပန်းရောင်နှင့်ပန်းရောင်ပူ အလင်းကိုခရမ်းရောင် တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူအပြာ ပန်းရောင် ပူပြင်းတဲ့ပန်းရောင် နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် Aqual အပြာရောင်ရောနှော တော်ဝင်အပြာရောင် ရေတပ်အပြာ ဆင်စွယ်နှင့်ပန်းရောင် မီးခိုးရင့်ရောင်
4T / Peach 3T / Peach6/ မက်မွန်5/ မက်မွန် 8 / မက်မွန်7/ မက်မွန် 2T / Peach6/ Black က5/ Black က 8 / Black က7/ Black က 2T / အနက်ရောင် 4T / အနက်ရောင် 3T / အနက်ရောင် 8 / အနက်ရောင်ပူပန်းရောင်7/ အနက်ရောင်ပူပန်းရောင် 3T / ပန်းရောင်နှင့် Aqual ပြာရောင် 2T / ပန်းရောင်နှင့် Aqual ပြာရောင်5/ ပန်းရောင်နှင့် aqual အပြာ 4T / ပန်းရောင်နှင့် Aqual ပြာရောင်7/ ပန်းရောင်နှင့် aqual အပြာ6/ ပန်းရောင်နှင့် aqual အပြာ 2T / အနက်ရောင်ပူပန်းရောင် 4T / အနက်ရောင်ပူပန်းရောင် 3T / အနက်ရောင်ပူပန်းရောင်6/ အနက်ရောင်ပူပန်းရောင်5/ အနက်ရောင်ပူပန်းရောင် 3T / မက်မွန်နှင့်သန္တာ 2T / မက်မွန်နှင့်သန္တာ5/ မက်မွန်နှင့်သန္တာ 4T / မက်မွန်နှင့်သန္တာ7/ မက်မွန်နှင့်သန္တာ6/ မက်မွန်နှင့်သန္တာ 2T / မီးခိုးရောင်နှင့်ပန်းရောင် 8 / မက်မွန်နှင့်သန္တာ 2T / ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင် 8 / ပန်းရောင်နှင့် aqual အပြာ 4T / ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင် 3T / ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်6/ ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ပူ5/ ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ပူ 8 / ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ပူ7/ ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ပူ 4T / မီးခိုးရောင်နှင့်ပန်းရောင် 3T / မီးခိုးရောင်နှင့်ပန်းရောင်6/ မီးခိုးရောင်နှင့်ပန်းရောင်5/ မီးခိုးရောင်နှင့်ပန်းရောင် 8 / မီးခိုးရောင်နှင့်ပန်းရောင်7/ မီးခိုးရောင်နှင့်ပန်းရောင် 2T / bean သဲအရောင် 3T / bean သဲအရောင်7/ WATERMELON အနီရောင်6/ WATERMELON အနီရောင် 8 / WATERMELON အနီရောင် 3T / WATERMELON အနီရောင် 2T / WATERMELON အနီရောင်5/ WATERMELON အနီရောင် 4T / WATERMELON အနီရောင်7/ ပန်းရောင်နှင့်ပူပန်းရောင်6/ ပန်းရောင်နှင့်ပူပန်းရောင်5/ ပန်းရောင်နှင့်ပူပန်းရောင် 4T / ပန်းရောင်နှင့်ပန်းရောင်ပူ 12M / ပန်းရောင်နှင့်ပန်းရောင်ပူ 8 / ပန်းရောင်နှင့်ပူပန်းရောင် 3T / ပန်းရောင်နှင့်ပန်းရောင်ပူ 2T / ပန်းရောင်နှင့်ပန်းရောင်ပူ6/ ခရမ်းရောင်အလင်း7/ ခရမ်းရောင်အလင်း 8 / ခရမ်းရောင်အလင်း 12M / အလင်းခရမ်းရောင် တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူ 2T / အပြာ တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူ 3T / အပြာ တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူ 4T / အပြာ တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူ5/ အပြာ တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူ6/ အပြာ တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူ7/ အပြာ တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူ 8 / အပြာ တော်ဝင်အပြာနှင့်အတူ 12M / အပြာ 12M / ပန်းရောင်6/ ပန်းရောင်ပူ 2T / နက်ရှိုင်းသောအနီ5/ ပန်းရောင်ပူ 3T / နက်ရှိုင်းသောအနီ 12M / Aqual အပြာရောင်ရောနှော 8 / ပန်းရောင်ပူ 4T / နက်ရှိုင်းသောအနီ7/ ပန်းရောင်ပူ5/ နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် 8 / တော်ဝင်အပြာရောင် 12M / ပန်းရောင်7/ တော်ဝင်အပြာရောင် 12M / တော်ဝင်အပြာရောင် 12M / ရေတပ်အပြာရောင် 12M / ဆင်စွယ်နှင့်ပန်းရောင် 4T / bean သဲအရောင်5/ bean သဲအရောင်6/ bean သဲအရောင် 2T / Dark Grey7/ bean သဲအရောင်
Fuffffy Ruffles မိန်းကလေးများ Tutu Pettiskirt - 4T / Peach backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
စကတ်ပစ္စည်းများ: 80% နိုင်လွန်, 20% polyester
စကတ်ကို tulle အလွှာ ၂ ခုနှင့်နံရံတစ်ချပ်မှပြုလုပ်သည်။
သင်ပစ္စည်းကိုရရှိပြီးသည့်အခါထည်သည်ဆန့်ကျင်သောဆန့်ဆေးဖြစ်သည်၊ Pls သည်ခဏကြာမျှဆွဲထားပြီးမကြာမီ fluffy နှင့် flat ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။
သိုးထီးအဘို့သိုးမွေးထည်ပိုမိုအဆင်ပြေ။ ချိန်ညှိခါး၊ သိုးမွေးထည်၊
စူပါ !!! အားလုံး ok ဝတ်စားဆင်ယင်သည်! ပိုလန်အတွက်2ပတ်အတွင်းတင်ပို့။
Spódnicapiękna, starannie wykonana ။ Zamówiona 5.11aotrzymana 18.11 czyli niespełna2tyg ။ Zamawiam kolejną။ Polecam!
Заказများ 16.10.19 ရရှိခဲ့ 14.11.19 ရရှိခဲ့သည်မှာရောင်းချသူတစ် ဦး ၏ဂျော့ဘ်နှစ်ခုအားအလွန်ကောင်းသည်၊ အရည်အသွေးကောင်းသည်၊ ဤထူးခြားသောလူကုန်ကူးမှုဖြင့်နှစ်ရက်အတွင်းကလေးငယ်များအနေဖြင့်ရောင်းဝယ်မှုကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ❤️
အရည်အသွေးကောင်း! ငါ့သမီးကအရမ်းတူ! သူမကအမြဲရွေ့လျားနေလို့ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကမတူကွဲပြားပါတယ်။